Bit By Bit - Idebe ihe omume - 2.1 Okwu Mmalite
Na analọg afọ, obon data banyere omume-neme ihe mgbe-bụ oke ọnụ, ya mere, na ole. Ugbu a, na dijitalụ afọ, ndị ahụ asị ọtụtụ ijeri mmadụ ndị e dekọrọ, echekwara, na analyzable. Dị ka ihe atụ, mgbe ọ bụla ị pịa a website, eme ka a oku na gị cell ekwentị, ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ maka ihe na gị kaadị, a digital ndekọ nke gị omume na-kere na ịchekwa site a azụmahịa. N'ihi na ndị a data na-a na-eweta ndị mmadụ kwa ụbọchị omume, ha na-akpọkarị digital metụtara. Tụkwasị na nke a metụtara ẹkenịmde ulo oru, ndị ọchịchị na-enwe incredibly bara ọgaranya data banyere ma ndị mmadụ na ulo oru, data nke bụ mgbe digitized na analyzable. Ọnụ ndị a azụmahịa na ọchịchị ndekọ na-akpọkarị nnukwu data.
Mgbe-ebili iju mmiri nke nnukwu data pụtara na anyị na-esi n'otu n'ụwa ebe akparamàgwà data dị ụkọ na a ụwa ebe akparamàgwà data hiri nne. Ma, n'ihi na ndị a na ụdị data bụ dịtụ ọhụrụ, ihe ndabara ọjọọ ego nke nnyocha iji ha anya dị ka ndị ọkà mmụta sayensị blindly achụ dị data. Ibuot emi, kama, awade a ụkpụrụ na-eduzi obibia ịghọta dị iche iche na isi mmalite nke data na otú ha ike ga-eji. Nke a na ano nghọta kwesịrị inyere gị mma kwekọọ gị nnyocha ajụjụ ndị kwesịrị ekwesị na isi mmalite nke data. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na ndị dị otú ahụ ẹdude isi mmalite na-adịghị ya, doo gị na-anakọta gị onwe gị data site na iji echiche na-eme n'ọdịnihu isi.
A nzọụkwụ mbụ na-amụta na nnukwu data bụ ịghọta na ọ bụ akụkụ nke a nabatara umu udi nke data nke e ji mee ihe na-elekọta mmadụ nnyocha ruo ọtụtụ afọ: observational data. Olee ihe enyemaka, observational data bụ ihe ọ bụla data na-abịa site n'idebe ihe a na-elekọta mmadụ usoro na-enweghị intervening n'ụzọ ụfọdụ. A crude ụzọ na-eche banyere ya bụ na observational data bụ ihe niile nke na-adịghị abuana ekwu okwu na ndị mmadụ (eg, nnyocha ndị e mere, na isiokwu nke Ibuot 3) ma ọ bụ na-agbanwe agbanwe ndị mmadụ gburugburu (eg, nwere, na isiokwu nke Chapter 4). N'ihi ya, na mgbakwunye na azụmahịa na ọchịchị ndekọ, observational data na-agụnye ihe dị ka ihe odide nke akwụkwọ akụkọ isiokwu na satellite foto.
Ibuot emi nwere n'akụkụ atọ. Akpa, na mpaghara 2.2, m na-akọwa nnukwu data na ihe nkowa na dokwuo anya a isi ihe dị iche n'etiti ya na ndị data na-adịkarị e ji mee ihe maka mmadụ nnyocha n'oge gara aga. Mgbe ahụ, ná Nkebi nke 2.3, m na-akọwa iri nkịtị e ji mara nnukwu data isi mmalite. Ịghọta àgwà ndị a na-enyere anyị aka ngwa ngwa na-aghọta ihe ma eme na adịghị ike nke ẹdude isi mmalite na ga-enyere anyị njikota ọhụrụ na isi mmalite ndị ga-kere n'ọdịnihu. N'ikpeazụ, ná Nkebi nke 2.4, m na-akọwa atọ isi research azum na i nwere ike iji na-amụta site observational data: agụta ihe, ịkọ ihe, na approximating nnwale.